Ikhabhathi yamawele eDeluxe kwiKampu yeeMoto iWaiau 2
Igumbi lakho lokulala e indlu yamaplanga sinombuki zindwendwe onguWaiau
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uWaiau iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ime kuState Highway 70 kwilokishi yaseWaiau, sikuhambo nje lwemizuzu engama-35 ukuya eHanmer Springs Thermal Resort kunye nemizuzu engama-75 kuphela ukuya eChristchurch. Gxila emachibini kwaye emva koko ubalekele kwindawo ezolileyo yeparadesi yethu. Eli ligumbi elinesayizi enye kwiinkampu zethu zokuhlala (amagumbi ali-12 ewonke) kwaye livuleleka kwintendelezo eqhelekileyo enelanga. Igumbi linebhedi enkulu (ubukhulu bokulala obuyi-2) kunye netafile enezitulo. I-Wifi iyafumaneka kwigumbi nakwindawo ejikeleze inkampu.
Indawo yethu yokuhlala yakhiwa ekuqaleni kweminyaka yoo-1960 kwaye yayisetyenziswa ngabasebenzi baseNasella Tussock ababesaziwa njenge "Grubbers", iqela lamadoda asekuhlaleni naphesheya kweelwandle awayedla ngokusebenza umhlaba esusa ingca yeTussock kwiinduli ezijikelezileyo. Imibhalo yabo isenokufumaneka ezindongeni kwamanye amagumbi ethu namhlanje.
Sinendawo yokugcina umlambo emva kwenkampu yethu ekulungele ukuhamba ngokuzolileyo, ukubaleka okanye ukukhwela ibhayisekile. Idolophu yethu incinci kwaye kwaye abantu banobuhlobo. Jonga iinkwenkwezi kumboniso ngobusuku obucacileyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Waiau